Soso-kevitra avy amin'ny Semalt On Ahoana ny fandroahana ny adiresy IP amin'ny Google Analytics
Raha tsy misy ny adiresy IP avy amin'ny Google Analytics dia zava-dehibe toy ny tetikady ho an'ny fanentanana ataonao. Mba hitazonana ny mombamomba anao ho marina sy madio, mandinika ny fametrahana Google Analytics ao amin'ny tranonkalanao. Rehefa vita ny fametrahana sy ny fanavaozana ny GA amin'ny tranokalanao, esory ny adiresy IP anao manokana mba tsy hikorontana amin'ny mpitsidika mety hitranga. Ny fifamoivoizana anatiny dia tsy manelingelina ny mpitsidika ihany fa manaparitaka ny taham-pahaizana, ary koa ny fiantraikany amin'ny tatitra ataonao.
Nandritra ireo tapa-bolana lasa izay, ny varotra varotra sy ny fifamoivoizana anatiny nateraky ny birao dia nisy fiantraikany tamin'ny angona mpanjifa. Ny mpitsidika sy ny ghost spams koa dia nandray anjara tamin'ny fifamoivoizana anatiny tamin'ny fomba lehibe - φαρμακεια online lierac. Ny fanatsarana ny fifandraisana amin'ny mpampiasa dia tena zava-dehibe amin'ny fampiharana ny Search Engine Optimization. Atsaharo ny adiresy IP misy anao, ireo spiders sy bots fantatra avy amin'ny angon-drakitrao mba hahatratrarana angon-drakitra kokoa.
Ampiasao ny torohevitra omen'i Oliver King, mpitantana ny Success Successor an'ny Semalt , mba hanofana spam, spam referener, ary adiresy .
Nahoana ianao no mila manafoana ny adiresy IP amin'ny Google Analytics
Ny fiasa amin'ny tranokalanao manokana dia manampy amin'ny fifamoivoizana anatiny. Arakaraky ny hitohizanao sy ny mpiara-miasa aminao ny sivana amin'ny pejin'ny tranonkalanao, dia mihabetsaka kokoa ny isan'ny mpitsidika. Ny mpanjifa miaraka amin'ny mpiasa dia tokony hanafoana tanteraka ny adiresy IP rehetra. Ny maha-zava-dehibe ny fihenanam-pitenenanao ambany ambany ao amin'ny fanentanana Search Engine Optimization dia tsy voamarina tsara. Ny taham-pihetseham-po dia mitana andraikitra goavana eo amin'ny fanombohananao ny fivoahan'ny tenifototra.
Ny tahan'ny fisondrotan-karama dia amin'ny ankapobeny amin'ny isan'ireo mpanjifa mitsidika ny tranonkalanao ary avy eo tsindrio indray. Ny fitazonana ny sanda mitazona anao dia manome toky anao fa afaka namakivaky ireo pejy hafa ireo nitsidika ny pejinao..Raha tsy misy ny adiresy IP avy amin'ny tranokalanao dia mampidina ny sanda fampidinana, noho izany ny teny fanalahidinao miovaova ho heverin'ny Google.
Ahoana ny fandroahana ny adiresy IP avy amin'ny GA anao
Ny fandefasana ny adiresy IP avy amin'ny Google Analytics dia miteraka dingana arahina. Araho ity fomba fitsaboana ity mba tsy hialana amin'ny data.
1) Tsindrio ny safidin-tsakafo 'manaraka' ary tadiavo ny tranokalanao.
2) Tsindrio eo amin'ny zoro havanana havanana amin'ny bokotra 'Admin'
3) Jereo ny rohy momba ny angon-drakitrao ary tsindrio ny fijerinao.
4) Tsindrio amin'ny filaharam-pifanaram-paritra izay miaraka amin'ny Google Analytics.
5) Tsindrio ny 'Filtres vaovao'. Amin'ity dingana ity dia afaka manaisotra ny adiresy IP ianao raha tsy misy olana.
6) Jereo ny boaty fidina aseho ao amin'ny GA, ary fidio 'Exclude'. Tohizo ary fidio ny 'fifamoivoizana amin'ny adiresy IP'.
7) Misy fomba roa ampiasaina hanamarinana ny adiresy IP anao. Azonao atao ny mamerina ny adiresy ao amin'ny tsipiky ny ordinateranao amin'ny alàlan'ny fanoratana ny IP anao na mandefa HTTP mangataka ny adiresinao.
Aorian'ny fandefasana ny adiresy IP anao, miverena any amin'ny pejinao Google Analytics, ary mamolavola ny adiresinao ao anaty boaty kely. Kitiho ny safidy hanivanana sy hanilihana ny adiresy IP avy amin'ny tranokalanao sy ny Google Analytics anao. Ireo spam, bots, ary spiders ny referrer dia toy ny fandeferana amin'ny orinasa an-tserasera amin'ny herinandro vitsy lasa izay. Ny fikojakojana ny baikonao sy ny fitadiavam-bola madio dia tena zava-dehibe.